Udonga Lamandla Lezincwadi | Joko Tea
izindaba zokuyeka ukuthula izindaba zokuyeka ukuthula
izindaba zokuyeka ukuthula
Izingcwadi ezinika amandla Izingcwadi ezinika amandla
Amandla Angelinganiswe Amandla Angelinganiswe
Zonke lezi zincwadi ziyingxenye Yephrojekthi Yokubhala Yabesifazane ye-POWA. Kwabanye, kuyithuba lokuxoxa indaba yabo okokuqala, futhi kuyingxenye ebalulekile yohlelo lokululama. Abanye sebezuze iphupho labo lakudala lokuba ngababhali abanokushicilelwe ngale phrojekthi, ngesikhathi abanye behlonzwe kule phrojekthi ukuthi basho izinkondlo zabo ezinkomfeni zaphesheya.
I-BREAKING THE SILENCE
Isihloko esithi ‘Painting my Future’ silandela ukushicilelwa kwe-New Dawn (2016), neyavumela abesifazane abangababhali ukuthi baqhubekele phambili kwabakwaziyo okusha. Manje-ke njengoba sebeya ngokuzethemba kanye nokuzimela, bangacabanga futhi bakhethe ikusasa eliqhakazile.
Zitholelela eyakho ingcwadi (E-Book) Mahhala uma uzinekala ngokuhlangane nokulwisana naloludlame futhi mase uyaludownloada kolu loluhlu lezingcwadi ezilandelay
Leli qoqo, elibizwa ngendlela efanele ngokuthi i-New Dawn, lethula ababhali besifazane abaningi abayizizukulwane ezahlukene abaqhamuka ezimweni zezenhlalo kanye nezamasiko ezehlukene eNingizimu Afrika. Sizwa amazwi anamandla, futhi amaningi amantombazane asesikoleni, abesifazane abasebancane, omama kanye nogogo asebenqobe lobu bunzima, izinhliziyo ezibuhlungu, ukuhlukunyezwa, ukufakwa eqoeqwni elithile ngenxa yobulili emphakathini lapho kukhonya khona abesilisa ukuze bafinyelele kokusha, kulokho ngamunye kubona akuqondayo, i-'New Dawn' Ikhwezi Labo Elisha.
Isihloko esithi “Perfectly Imperfect” sasivelela ngokwemvelo emibhalweni ebonakala ku-“Breaking the Silence”. I-“Perfectly Imperfect” ichaza ukuthi ngeke abantu besifazane bangabi nokuthile okungahambi kahle, futhi bangahambisani nalokho okuhlelwe ngokuphathelenne nobulili okuqhamuka kwezendabuko, nomphakathi okukhonya kuwo abesilisa.
Leli qoqo elikhethekile liqukethe izinkondlo, izindaba ezimfushane kanye nama-essay abantu okungakashicilelwa okutholwe kusukela eqoqweni lokubhala lokuqala le-POWA ngo-2005.
Izihloko ezidingidwa ku-Sisterhood sihlanganisa ubudlelwane kanye nokokuxhumana okusetshenziswa abesifazane ukukhombisa uthando, ukweseka kanye nokubambana komunye nomunye: omama, ogogo, odadewethu, amadodakazi, abangani, omakhelwane, abeluleki, abalingani, ozakwethu kanye nabantu esingabazi.
Zonke izindaba kanye nezinkondlo kuleli qoqo ziyinsiza yokuthi abesifazane abehlukene abakhetha ngayo ukukhombisa kanye nokwabelana Ngothando kanye Nomzabalazo wabo. Lezi zindaba zifuna ukuhlinzeka isithangami sokuthi abesifazane bakhulume mayelana nezinto ezibathintayo, futhi isihloko esithi Love and Revolution kuphokophelwe ngaso ukucacisa lokho okungewona amaqiniso ngokuphathelene nothando futhi ngezindaba ezimfushane ezahlukene kanye nezinkondlo, abesifazane bafakazela ukuthi lokhu okubili kusondelene kakhulu.
Iqukethe izindaba ezitholakele emihlanganweni yokucobelelana ngolwazi ngokuphathelene nokubhala kanye nangokuzimela. Lezi zindaba zidabula okugubezele ngokuphathelene nalokho okulindelelwe umphakathi ukuze kufinyelelwe ezinhliziyweni kanye nasemiqondweni yabafundi. Ababhali ngezinkondlo, izindaba ezimfushane kanye nama-eseyi abo bakhombisa izindlela eziningi abesifazane abangangalandeli ngazo lokho okulindeleke ngokwendabuko bese bezimela.
I-Murmurs of the Girl in Me iyiqoqo lezinkondlo, ama-eseyi kanye nezindaba ezimfushane ezixoxwa yintombazane engaphakathi kumuntu, kusukela kwenzeka udlame kanye nakuko konke ukuwa evuka ezama ukuphila kanye nokubuyisana mayelana nobudlelwane bakhe nalokho ayikho njengamanje.
Lezi zihloko ze-Positive Survivors zihlanganisa lezi zihloko ezilandelayo, righting poverty & violence and HIV/AIDS Together. Ububha, udlame kanye negciwane lesandulela ngculazi ubulembu obugcina abantu besifazane bevalelekile. Igciwane lesandulela ngculazi liyikona kokubili imbangela kanye nomphumela wodlame, ngesikhathi ububha bukhuphula lokho okwehlela abesifazane ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi kanye nodlame.
Izihloko zomncintiswano ka-2004/5 kwakuyilezi:
Ikhulumangezihloko zokuthula kanye nokuhlukunyezwa, indlela okuyinkimbinkimbi ngayo ukuba yisisulu, ukujula nendima yobulili, ukugubha abantu besifazane kanye nombono wekusasa.
Uma kukhona ushintsho esizoluletha emphakathini wethu njengamadoda, kudingeka siqonde, sikwazi ukubona futhi sihlabe zonke izinhlobo zokucwasa ezibhekiswe kubantu besifazane njengoba lezi zinto zibhebhethekisa lesi sihlava Sodlame Olubhekiswe Kwabesifazane ezweni lethu. Lona umyalezo oqukethwe encwajaneni eyenzelwe amadoda futhi ebhalwe amadoda esihloko sithi, ‘No Excuses’. Noma ngabe yimibono evuna amadoda, ukucwaswa ngokobulili noma ukucwasa nje okujwayelekile, ekhaya noma emsebenzini, le ncwadi ethi, ‘No Excuses’ ihlaba ikhwelo kuwo wonke amadoda ukuba asukume alwe nalokhu: ngokubalula nokuphonsela inselele izinkambiso, esivame ukungazinaki, emphakathini ovuna amadoda njengalo waseNingizimu Afrika.
Indoda, noma ngabe ingubani, noma ngabe idabuka kuphi, ingaba yindoda eletha umehluko omkhulu futhi ibe yisipho esimangalisayo emphakathini. Lona umyalezo oyisisekelo nogqugquzelwa yisiBopho se-Carling Black Label esibhekise emadodeni: I-Six Pack Yemigomo Yezingqwele. Esikhathini esiningi umongo wokuba yindoda uye uchazeke kabana, izici ‘Zokucindezela Ezibonakala Kwamanye Amadoda’ kube yizona ezigqanyiswayo, ikakhulukazi njengoba izwe lethu linesibalo esiphezulu se-GBV nodlame emakhaya.
I-Six Pack Yemigomo Yezingqwele ithi yona ukugqugquzelwa kwemiyalezo emihle ngobudoda esinye sezinyathelo ezibaluleke kakhulu ukuze sifinyelele ekubeni umphakathi ongenadlame; futhi iphinde yamukele Izimfanelo Eziyisithupha amadoda alungile aphila ngazo, ukuze sikwazi ukufinyelela le njongo.